‘पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आए पनि २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोला’–डा. देवकोटा – Parbat News
‘पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आए पनि २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नुहोला’–डा. देवकोटा
२३ जेठ, पर्वत । जिल्ला अस्पताल पर्वतका डा. शिशिर देवकाटोले पिसिआर रिर्पोट नेगेटिभ आए पनि २ हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका छन् । भारतबाट र विदेशबाट आउनेहरुलाई सकभर पिसिआर चेक गरेर मात्रै गाउँमा पठाउनुपर्ने धारणा राख्दै डा. देवकोटाले पिसिआरबाट नेगेटिभ रिर्पोट आउनेहरु समुदायको सम्पर्कमा नआई क्वारेन्टाइनमा बस्न आग्रह गरेका हुन ।
पिसिआर रिर्पोटले ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र पोजेटिभ रिर्पोट देखाउँने भन्दै डा. देवकोटाले क्वारेन्टाइनमा बस्न पर्वतबासीलाई आग्रह गरेका हुन । हालसम्म भारतबाट आएकाहरुलाई मात्र पर्वतमा कोरोना संक्रमण भेटिएको भन्दै डा. देवकोटाले समुदायमा संक्रमण हुनबाट रोक्नका लागि आफूले हरदम प्रयास गरीरहेको बताएका छन् । ‘सदरमुकाम कुश्मा बजारमा पुलिङ क्वारेन्टाइन बनाउनुको उद्देश्य समुदायमा संक्रमण नफैलियो भनेर हो’ डा. देवकोटाले भनेका छन्–‘म सकेसम्म पिसिआर नगरि गाउँमा पठाउनहुन्न भन्ने अडानमा छु ।’
कोरोना संक्रमीतको उपचारका लागि योजनाबद्ध काम गरीरहेका डाक्टर देवकोटाले पर्वत जिल्लामा कोरोना अस्पतालको स्थापना गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अस्पतालमा वेड संख्या थपेर ५० शैयाको बनाउने उनको योजनामा भने पछिल्लो समय यथेष्ट सहयोग नमिलेको देखिन्छ । २० शैयाको अस्पताल स्थानीय तहहरुसंगको समन्वयमा स्थापना गरेका डा. देवकोटाले जिल्ला अस्पतालका सवै स्वास्थ्यकर्मी कोरोनाको उपचारमा तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै आएका छन् ।
कोरोना संक्रमण शुरु भएपछि पनि पर्वत जिल्ला अस्पतालको इमेरजेन्सी सेवा भने निरन्तर सुचारु छ । प्रसुति सेवा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरीरहेको जिल्ला अस्पतालमा एक महिनामा मात्र १८ वटा प्रसुति शल्यक्रिया भएका थिए । डा.देवकोटाले सवै निकायको सहयोग र समन्वय हुन सकेमा पर्वत जिल्लामा कोरोना नियन्त्रण सहज भएको बताउँछन् ।
भौगोलिक हिसावले सानो जिल्ला भएका कारण पनि अन्य जिल्लाको तुलनामा संख्यात्यक रुपमा कोरोनाको उपचार गर्न सहज हुनेछ । तर, कोरोना संक्रमण समुदायमा फैलिएमा भने त्यो अवस्थामा वर्तमान जनशक्ति र तयारी अपुरो हुने छ । त्यसैले डा. देवकोटाले सकभर समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन पुलिङ क्वारेन्टाइन र स्थानीय तहका क्वारेन्टाइनलाई ब्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आइरहेका छन् ।
कोरोनाले रोकेन पर्वत अस्पतालको सेवा : एकै दिन ४ वटा अप्रेसन
‘पर्वत अस्पतालका डाक्टर २४ सै घण्टा उपचारका लागि तयार छन’–डा. देवकोटा
पर्वतका ९ जना संक्रमीतको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
पैयू गाउँपालिकाको हुवासमा शहिद स्मृति भवनको निर्माण कार्य शुरु